Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya oo kulan sagootin ah u sameeyay safiirkii Burundi u fadhiyay Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya oo kulan sagootin ah u sameeyay safiirkii Burundi u fadhiyay Soomaaliya
August 18, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya oo kulan sagootin ah u sameeyay safiirka Burundi.
Muqdisho-(Puntland Mirror)Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Khamiis ah kulan sagootin ah la qaatay safiirka dalka Burundi u fadhiya Soomaaliya, Jen. Joseph Nkurunziza oo waqtigiisii safiirnimo uu dhamaaday.
Madaxweyne Xasan ayaa uga mahadceshay safiirka sida wanaagsan ee uu gutay shaqadiisa mudadii labada sanno ahayd ee uu xafiiska hayay oo uu safiir wadankiisa uga ahaa Soomaaliya.
Dhanka kale, safiirka waqtigiisa dhamaaday ee Burundi ayaa hadal ka jeediyay kulanka uu Madaxweynaha la yeeshay, wuxuuna uga mahad-celiyay Madaxweynaha Soomaaliya, masuuliyiinta kale ee Dowladda iyo Shacabka, sidii wanaagsaneyd ee ay ula shaqeeyeen intii uu joogay Soomaaliya.
Burundi ayaa ah dalka labaad ee ugu badan oo ku deeqay ciidamada nabad ilaalinta Midowga afrika ee ku sugan gudaha Soomaaliya.